Home Wararka Wasaaradda Amniga oo fasaxday Mudaaharaad lagu dalbanayo caddaaladda Ikraan Tahliil
Waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu cirka isku shareeri doono isqabqabsiga siyaasadeed ee u dhexeeya Rooble iyo Villa Somalia kaddib markii Dowladda Turkiga aay dalkeeda ka soo masaafurisay Fahad Yasin oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Hooyada Ikraan Tahliil Faarax oo ku maqan gacanta hay’adda NISA isagoo u ogolaaday in aay qabsan karto Mudaaharaad Nabadeed caddaalad loogu raadinaayo Ikraan Tahliil.
Madaxweynaha Muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa diidan in kiiska Ikraan aay qaaddo Maxkamadda Ciidamada si aay caddaalad u hesho Ikraan, balse wuxuu isku dayo dhowr ah uu ku guul darreystay in qoyska Ikraan aay qaataan diyo lacag ah.
Wasiirka oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in ay Wasaaradiisu ogolaatay Banaan bax kadhan ah Fahad yaasiin oo ay qoyska ku eedaynayasn kiiska Ikraan inuu muqdisho kadhacayo dhawaan.
Wasiirka wuxuu amar siiyay hay’adaha Amniga inay sugaan Amaanka banaanbaxa, wuxu sidoo kale sheegay inuu gacan bir ah ku qaban doono cidii isku dayda carqaladaynta banaan-baxayaasha.
Talaabadan ayaa umuuqata mid la doonayo in lagu cambaareryo Fahad iyo farmaajo, lama oga waxa ay villa Somalia uga jawaabi doonto.
Waxaa hubaal ah in haddii uu noqdo mudaaharaadka mid weyn aay dhici doonto in dalka uu galo xaalad kale taasoo keeni doonta in Maxkamadda aay soo dedejiso kiiska Ikraan Tahliil.